“Hiverina amin’ny tompony ny fitondrana” hoy I Mektoub !	Magro 28 Fev 11
Video Hiverina @ Asabotsy 11 h ny Pdt Ravalomanana hoy Rakotoarivelo Tolona tsy omby tratra ! Hiverina alohan’ny 26 juin izy ! Auteur Solo RazafyPublié le 28 février 20111 mars 2011Catégories Magro, Malagasy, Négos, PolitiqueÉtiquettes Marc Ravalomanana	3 pensées sur ““Hiverina amin’ny tompony ny fitondrana” hoy I Mektoub !”	Ziry Onésime dit :	1 mars 2011 à 5 h 29 min	Mazava ho azy ny reaka!
Babyfoot dit :	1 mars 2011 à 10 h 13 min	Efa nazava ela be fa « Mivaly amin’ny frantsay ny ratsy nataony tamin’ny Madagasikara » !
Bemafohy dit :	1 mars 2011 à 22 h 39 min	Izao no fantatro tsy maintsy miala eo rajoelina sy ny namany fa na dia izany aza mila midina an-dalam-be isika,miresaka amin’ny miaramila izay fatantsika tsirairay avy ary tsy mividy lasantsy any amin’ny total intsony.
Précédent Article précédent : Video – Olivier Rakotovazaha au MagroSuivant Article suivant : Video – Manoela Magro 25/02/11